Shufto badeeda Somalida oo madaxfurasho ku siidaayey qoys Danish ah oo ay haysteen – SBC
Shufto badeeda Somalida oo madaxfurasho ku siidaayey qoys Danish ah oo ay haysteen
Kooxaha burcad badeeda Soomaaliya ayaa la sheegay inay ku siidaayeen lacag malaayiin doolar gaaraysa oo madaxfurasho ah qoys u dhashay wadanka Denmark oo ay afduub u haysteen mudo bilooyin ah.
Nin ka mid ah burcad badeeda oo magaciisa ku sheegay Maxamed Axmed ayaa sheegay in 7 qof oo Danish ah oo la haystey lagu qaaday doon yar 8-dii subaxnino ee shaley Talaadadii waxaana uu sheegay in ogaalkiis lacag 3 milyan oo doolar oo madaxfurasho ah la baxshay.
Ninkani wuxuu sheegay in qoyskaasi Danish-ka ah loo qaaday markab dagaal oo Denmark leeyahay kaasi oo ku soo dhawaaday xeebta Ras Bina ee waqooyiga Bari ee Soomaaliya oo halka lagu haysto markabka laga leeyahay wadanka Gariiga ee MV Dover oo lagu dulhaysto muwaadiniinta Danish-ka mudada lixda bilood ah.
Todobadan qof ee u dhashay Denmark ayaa kala ah Jan Quist Johansen, Xaaskiisa & laba caruur dhaleen & waliba laba qof oo ahaa naakhuudayaasha doonidii ay ku safrayeen, waxaana burcad badeeda Soomaalida ay qafaasheen 24-kii bishii February ee sanadkan 2011 xiligaasi oo ay ku safrayeen doonida Deckhands SY ING ee calanka Danish-ka ku gooshaysay.
Kooxo wadaxaadayaal ah oo u dhashay Denmark ayaa socdaal ku tagey Magaalada Boosaso iyagoo u kuurgalayey habkii dadkan loo siidayen lahaa, waxaana wararku sheegayaan in sidoo kale duqeyda dhaqanka ee deegaankasi dadkaasi lagu heystey ay ku jireen xusul duub ku saleysan sidii loo siideyn lahaa dadkaasi.